संघीयतामा निजामती सेवा - Karobar National Economic Daily
query_builderSeptember 10, 2017 8:13 AM supervisor_accountगौरव पन्थी visibility1190
मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो । निजामती सेवा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति समर्पित हुन्छ । यसले लाभको नभई सेवाभावले कार्य गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । संघीयता आफैंमा बृहत् राजनीतिक अवधारणा हो । यसभित्र सबै नेपालीको उन्नति, प्रगति र समृद्धि लुकेको छ । संघीय शासन प्रणाली हामी सबैका लागि नौलो अभ्यास हो । यसको कुशल कार्यान्वयन जिम्मेवार राजनीतिक दल र जनमुखी कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र सम्भव छ ।
तसर्थ राजनीतिक नेतृत्वले कोरेको मुलुकको भावी गन्तव्यमा नयाँ उत्साह र जिम्मेवारीका साथ आ–आफ्नो कर्तव्य वहन गर्नु सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासन सञ्चालन, व्यवस्थापन र रूपान्तरणको दायित्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको काँधमा आएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिको संवद्र्धन गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजामती सेवाले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन तथा लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले स्थायित्व दिन सकेका छन् । राष्ट्रिय सङ्कटका बखत अविच्छिन्न सेवा प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्रसेवकहरूले मुलुकी विकासमा पु¥याएको योगदान तथा जनयुद्धका बखत ज्यान हत्केलामा राखेर दूरदराजमा पु¥याएको सेवा अविस्मरणीय छ । त्यसैगरी राजनीतिक शून्यको अवस्थामा मुलुकको नेतृत्वसमेत सम्हालेर मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न निर्वाह गरेको भूमिका विश्वमै अनुकरणीय छ । हाम्रो निजामती सेवा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक यथार्थसँग सुपरिचित छ ।
जनताका आवश्यकता, समस्या र आकांक्षालाई नजिकबाट नियालेको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् र संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने क्षमता रहेको छ । उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई मनन गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य र खुबीसमेत यसले राख्छ ।
विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ स्थानीय तहको गठन र निर्वाचन हुँदासमेत सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा रहने संगठन संरचना र जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने कार्य ढिला भइसकेको छ । सरकारले प्रदेश र संघीय निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिए पनि कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट गाउँ जान नमानेको भनी आलोचनासमेत हुँदै आएको देखिन्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउने निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न बनेको विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूको भावना समेट्न नसकेको भनी ट्रेड युनियनहरूले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी समायोजनजस्तो संवेदनशील विषयमा किन निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई समावेश गराइएन ? किन दूरदराजमा रहेका कर्मचारीहरूको भावना समेटिएन ? यसको जवाफ स्पष्ट पाइन्छ । यिनै कारणले गर्दा जनताको प्रत्यक्ष निकट रहेर सेवा प्रवाहमा आहोरात्र खट्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजनको विषयलाई केन्द्रले दिने र दूरदराजमा वर्षौंदेखि सेवा गरेका कर्मचारीले हात थापेर माग्ने विषय बनाइनु उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । समायोजन भएपछिको निजामती सेवाको स्वरूप कस्तो हुने ? कर्मचारीको वृत्ति प्रणाली के हुने ?
स्थानीयबाट स्थानीयमा, स्थानीयबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट संघमा सरुवा हुन सक्ने वा नसक्ने ? त्यसका आधार एवं मापदण्डहरू के–के हुने ? आदि जस्ता विषयहरूमा कर्मचारीलाई पूर्वसूचित नगर्दासम्म समायोजनले मूर्तरूप लिने देखिँदैन । ३५ दिने सूचना दिएर समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित रहेको कुरा जानकारहरू बताउँछन् ।
समायोजन विधि र प्रक्रियाबाट हीनताबोध महसुस गरेमा लामो सेवा अनुभव भएका कर्मचारीहरू अवकाश हुँदै जाने क्रम सिर्जना हुन्छ । यसले राज्यको थप व्ययभार बढाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत असर पु¥याउने देखिन्छ । त्यसैगरी नयाँ भर्ना तथा वृत्तिविकासलाई रोक्न नमिल्ने परामर्श लोकसेवा आयोगले दिइसकेको छ ।
कर्मचारीहरूको अवकाश हुने उमेरमा एकरूपता कायम गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने विषयहरू विगत वर्षहरूदेखि नै बजेट वक्तव्यमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सकिन्छ भने यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई समेत एकसाथ सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले हाम्रो निजामती सेवा इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर संविधान कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ । अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट सबैभन्दा बढी आफैँ नै प्रभावित हुनुपर्ने भएको छ ।
यस चुनौतीपूर्ण घडीमा संवैधानिक परिकल्पना पूरा गर्न निजामती कर्मचारीहरू पद, सिद्धान्त, विचार र आस्थाका आधारमा फुटेर होइन, एकताबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दिगो बनाउने र दूरदराजका जनताका सामु सरकारको सच्चा अनुहार देखाउने साधन भनेकै निजामती सेवा हो ।
यसलाई जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय सामथ्र्यका आधारमा विकास र परिचालन गरिनुपर्छ । संघीयतामा निजामती प्रशासनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्रशासक र राजनीतिक दलहरूबीच मस्तिष्क मन्थन हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको वर्तमान अवस्थामा ठूलो आकारको सार्वजनिक प्रशासनले मुलुकलाई गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन, तसर्थ सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा कमी नहुने गरी एकीकृत संगठन संरचना निर्माणतर्फ ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाह एकीकृत रूपमा गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, कर्मचारी समायोजनको विषयलाई छुट्टाछुट्टै उठाइँदा यसले जनमानसमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । संघीयतामा करिब ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको समायोजनले मात्रै मुलुकले निकास पाउने होइन ।
करिब ६ लाखको हाराहरीमा रहेका प्रहरी, शिक्षक, स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूसहित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एकैसाथ समायोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई एकीकृत रूपमा विवादरहित किसिमबाट समायोजन गर्न सकेमा विद्यमान प्रशासनबाट निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समायोजन कित्ताकाट गरेर होइन, एकीकृत रूपमा सम्मानपूर्वक गर्न सक्नुपर्छ ।
देशले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मारेको स्थितिमा राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रशासनिक क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने तथ्य निर्विवाद छ । संघीयतामा निजामती सेवाले झनै बढी प्रतिस्पर्धी, भविष्यदर्शी, व्यावसायिक, कार्यमूलक, विकासमैत्री र परिवर्तनको संवाहकका रूपमा आफूलाई निखार गर्नुपर्ने हुन्छ । जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
यसका लागि चुस्त र छरितो संगठन संरचना, सरल र पारदर्शी कार्यप्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनताका इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकताको सम्बोधन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा कसैको दया र मायाले होइन, कानुन र विधिले चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
(लेखक अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)
संविधान संघीयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक